वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस् – Tufan Media News
वैदेशिक रोजगारीमा जाँदै हुनुहुन्छ ? यी कुरा ख्याल गर्नुहोस्
८ पुष २०७७, बुधबार १५:२६
हिजोआज धेरै जना रोजगारीका लागि भिजिट भिसामा परदेश गएर अलपत्र परेका खबरहरु सुनिन्छ । सर्वप्रथम त वैदेशिक रोजगारीमा जाने जोकोहीले पनि बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने भिजिट भिसा भन्नासाथ घुम्न जाने भिसा हो । घुम्न जाने भन्ने वित्तिकै यो वैदेशिक रोजगारीमा समेटिंदैन । तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने यदि तपाईँ कुनै देशमा भिजिट भिसामा जाँदै हुनुहुन्छ भने त्यो देशमा घुम्न जाने भिसा हो यो ।
त्यसकारण कुनै पनि देशमा भिजिट भिसामा गएर त्यहाँ काम गर्छु भन्ने उदेश्यले एजेण्ट र म्यानपावरलाई मोटो रकम बुझाएर जान हुँदैन । भिजिट भिसामा रोजगारीका लागि जाँदा निकै कठिनाइहरु भोग्न पर्ने हुन सक्छ । जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ । एउटा त रोजगारीको लागि यहाँबाट जाँदा श्रम स्वीकृति लिएर जानुपर्ने हुन्छ ।
तर भिजिट भिसामा जानेले त्यो लिएको हुँदैन । भिजिट भिसामा सम्बन्धित देश पुगेपछि आफैं काम खोज्न पर्ने, आफ्नो जिम्मेवारीहरु जस्तै आफैं खानाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, आफैंले बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । यी चुनौती झेल्दै आफैं काम कहाँ र कसरी खोज्ने त्यो नजान्दा समस्यामा पर्न सकिन्छ ।
अर्को कुरा आफ्नो जिम्मेवारी आफैं लिएर जाँदा पनि हामीलाई जसले पठाएको हुन्छ एजेण्ट म्यानपावर वा अन्य कुनै कन्सलटेन्सी उसलाई ठूलो मात्रामा रकम तिर्न पर्ने हुन्छ । रकम उनीहरु जति पनि लिन सक्छन् । रकम तिरेर परदेश पुग्दा पनि काम पाइन्छ या पाईदैन त्यो निश्चित हुँदैन ।
यदि तोकिएको समयमा काम खोज्न सकिएन र त्यहाँ आफ्नो भिसाको अवस्था फेर्न सकिएन भने स्वदेश नै फर्कनु पर्ने हुन्छ । अर्को कुरा भिजिट भिसामा विभिन्न प्रतिबन्धित देशमा पु¥याउने र अलपत्र पार्ने काम पनि हुन्छ । कहिलेकाहीँ मानव तस्करीमा समेत परिन्छ ।
विभिन्न देशमा लगेर थुनेर राख्ने अनि घरमा धम्क्याएर रकम असुल्ने लगायतका गतिविधि पनि भिजिट भिसामार्फत भएका छन् । त्यसकारण कुनै पनि देशमा कामका लागि भिजिट भिसामा त जाँनै हुँदैन । यी प्रक्रिया अपनाएर जान सकिन्छ परदेश विदेशमा काम गर्न जाने हो भने सही तरिका र प्रक्रिया अपनाएर जान जरुरी छ ।
अब कसरी जाने त भन्दा नेपालमा म्यानपावर एजेन्सीहरुले विदेशबाट कामको डिमाण्ड ल्याएका हुन्छन् । हिजोआज त कुन म्यानपावरले कुन देशका लागि कस्तो कामको माग ल्याएको छ भनेर पनि आफैंले हेर्न मिल्छ जुन कुरा म्यानपावरले भनिरहनै पर्दैन ।
त्यसकारण सबैभन्दा पहिला आफू जाने देश र गर्ने कामको टुङ्गो लगाउने । त्यो काम कुन देशबाट कुन म्यानपावरले ल्याएको छ त भनेर खोज्ने । अनि म्यानपावर कम्पनीमा सम्पर्क गर्ने । यो सबै कुरा वैदेशिक रोजगार विभागको वेवसाइटबाट नै थाहा पाउन सकिन्छ ।
म्यानपावर कम्पनीमा आफू जानकार भएर नै सम्पर्क गर्ने र त्यो काममा जानका लागि प्रक्रिया थाल्ने । नेपाल सरकारसँग श्रम स्वीकृति लिने र नेपालको नै विमानस्थलबाट गन्तव्य देशमा जाने गर्नुपर्छ । यसरी जाँदा तपाईँसँग करार सम्झौता हुन्छ ।
त्यसमा तपाईँले पाउने सेवासुविधा, तपाईँको तलब, कति वर्ष काम गर्न पाउनुहुन्छ लगायतका कुरा उल्लेख गरिएको हुन्छ । यसरी जाँदा यो करार अनुसारका सेवाशर्त पाइएन, अप्ठेरोमा परियो भने तपाईँको उद्धारको जिम्मा नेपाल सरकारको हुन्छ भने तपाईँलाई पठाउने म्यानपावरविरुद्ध उजुरी दिएर आफ्नो लागत फिर्ता लिन सकिन्छ ।(उज्यालो अनलाईन बाट)
नेपालीहरु अब यसरी सजिलै